तानसेनमा थप चहलपहल कसरी बढाउने ? – Palpa Samachar
तानसेनमा थप चहलपहल कसरी बढाउने ?
By palpa samachar	 On Sep 4, 2019
पर्यटकीय शहर तानसेन । धेरैले यसलाई नेपालको दार्जिलिङको संज्ञा दिन्छन् । चिसो हावापानी मनमोहक बातावरण यहाँको बिशेषता हो । कला संस्कृतिले पनि भरिपुर्ण छ तानसेन । यसकारण पनि तानसेनलाई धेरैले पहाडकी रानी भनेर पनि सम्बोधन गर्छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहरु र अझै बिदेशबाट भ्रमण आउनेहरुले तानसेनलाई खुबै मन पराउँछन् । यो एक महिनाको बीचमा तानसेनमा धेरै पर्यटक आए । बाह्य भनद बढी आन्तरिक पर्यटकहरू तानसेन आइपुगे । खासगरि जात्राको समयमा पहिले तानसेन घर भएकाहरू र काम र अन्य सिलसिलामा जिल्ला बाहिर रहेकाहरू जात्राको समयमा तानसेन आउने एकप्रकारको चलन जस्तै बनेको छ । यो समयमा तानसेनमा ब्यापार पनि राम्रो भयो, चहलपहल पनि देखियो ।
तानसेन आफैमा सुन्दर शहर मात्रै हैन यो एउटा ब्यापारिक शहर पनि हो । कुनै बेला यहाँ ब्यापारिक चलहपहल खुब हुन्थ्यो । छिमेकी जिल्ला गुल्मी, स्याङजाबाट समेत बजारमा किनमेल गर्न आइपुग्थे । अहिले गाउँमै पसल पुगे छिमेकी जिल्लाका त के छिमेकी गाउँका ग्राहक समेत तानसेनमा किनमेलका लागि आउँदैनन् । जसका कारण आजकल तानसेनका ब्यापारीहरु खुशी छैनन् । कतिपयले त महिनाभरि ब्यापार गरेर सटर भाडा समेत तिर्न पुग्दैन भन्छन् । ब्यापारीहरु ब्यापार नभएकोमा निराश नै छन् । कतिपयले पसल नै बेच्न खोजिरहेका छन् । नया“ पुस्ताहरुको ब्यापारमा आकर्षण देखिदैन । भएका पुराना पुस्ताले पनि अल्छी मानि मानि पसल कुरिरहेका छन् । तानसेनको मुटु मानिएको तेर्सो सडकका ब्यापारीहरू समेत खुशी छैनन् ।
एकातिर स्थानीय तहहरुको निर्माणसँगै तानसेनको चहल पहल घटेको स्वभाविकै हो । अर्कोतिर तानसेनलाई कसरी ब्यापारिक बनाउने भन्नेमा खासै चासो कसैको गएन । पछिल्लो समय त झनै तम्घासका लागि समेत बैकल्पिक बाटो भएपछि थप चहलपहल घट्यो । हुन त तानसेनका बासीले ब्यापार भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन । बाटो फराकिलो गराऔं, चहल पहल केही बढ्छ भन्दा उनीहरुले आफ्नो घर भत्किने डरले बरु बाटो चाहिदैन भनेर आन्दोलन नै गरे । जसका कारण तानसेन झनै सुक्यो । अर्कोतर्फ सिद्धार्थ राजमार्ग अन्र्तगत पोखरा जाने बाटोलाई कम्तीमा तानसेन हुँदै पठाउन सकिएको भए धेरै पर्यटक तानसेनमा आइपुग्थ्यो ।
ब्यापार पनि बढ्थ्यो बजारको चहल पहल पनि देखिन्थ्यो । यसको अझै पनि सम्भावना छ तर कतै सोच छैन । साच्चै ब्यापारिक चहलपहल नै बढाउने हो भने तम्घास जाने बाटो पनि तानसेनबाटै ल्याउनुपर्छ यसका लागि अहिलेको जस्तो साघुरो बाटोले हँुदैन । कुन हदसम्म बाटो बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे नगरपालिका र घरधनीहरुबीच संवादको खाँचो छ । अरु धेरै सम्भावनाहरू पनि छन् तर छलफल हुने अवसर नै छैन । यसको नेतृत्व तानसेनका ब्यापारीहरुको साझा संस्था पाल्पा उद्योग बाणिज्य संघ र पाल्पा ब्यापार संघले गर्नुपर्ने हो तर उनीहरू पनि साघुरो घेराभित्र रुमलिएका छन् । तानसेनको चहलपहल बढाउनु भनेको यहा“का ब्यापारीहरुको ब्यापार बढ्नुमात्रै हैन तानसेनको प्रचार हुनुपनि हो । यसकारण यसबारे सरोकारवालाहरुले सोच्नैपर्छ ।
पाल्पा समाचारपत्रको वर्ष ९ अंक १० को सम्पादकीय
स्याङ्जामा जिप दुर्घटना, एकको मृत्यु, २१ घाइते
दोभानमा क्रिष्टल माला र चुरा बनाउने तालिम सुरु